ज्योति लाइफको आईपीओ बाँडफाँड,नतिजा कसरी हेर्ने ? » Nepal Fusion	Nepal Fusion	ज्योति लाइफको आईपीओ बाँडफाँड,नतिजा कसरी हेर्ने ? » Nepal Fusion
ज्योति लाइफको आईपीओ बाँडफाँड,नतिजा कसरी हेर्ने ?
काठमाडौ २०७७ चैत्र १३ गते शुक्रवार
ज्योति लाईफ इन्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आज (चैत्र १३ गते, शुक्रबार) साधारण सेयर (आईपीओ) बाँडफाँड गरेको छ । फागुन २१ गते, शुक्रबारदेखि फागुन २६ गते, बुधबारसम्म निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेकाे साधारण सेयर (आईपीओ) बाँडफाँड भएको हो ।
कम्पनीकाे आइपिओको नजिता सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडले सञ्चालनमा ल्याएकाे www.iporesult.cdsc.com.np नामक वेभसाइट तथा एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडको nmbcl.com.np/shareallotment बाट सजिलै हेर्न सकिनेछ ।